GTA: စန်း Andreas cheat (PC ကို Edition ကို)
ဂိမ်း PC ကို
Grand Theft Auto: စန်း Andreas cheat
by ဂျေဆန် Rybka
တစ်ခုတည်းသော GTA: စန်း Andreas သင် PC အတွက်မလိုအပ်စာရင်း cheats
အဆိုပါ PC အတွက် 2005 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိ, Grand Theft Auto: စန်း Andreas စန်း Andreas ၏စိတ်ကူးယဉ်ပြည်နယ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Third-လူတစ်ရှုထောင့်ပွင့်လင်းကမ္ဘာဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာသုံးစိတ်ကူးယဉ်မြို့ကြီးများ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Santos, စန်း Fierro နှင့် Las Venturas ရှိပါတယ်။
ဘယ်လို cheat လုပ်ငန်း
GTA စန်း Andreas အဘို့အခိုး codes တွေကိုသင်ကိုသက်ဝင်ချင် cheat အတွက်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကာလအတွင်းထဲသို့ဝင်နေကြသည်။ codes ကိစ္စတွင်-အထိခိုက်မခံမရှိကြပေ။ သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာတစ်ကုဒ်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသင် "Cheat activated" မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်လိမ့်မည်။
ဤအ codes တွေကိုထုတ်ကြိုးစားပါ - ငါတို့သည် Elvis ကနေနင်ဂျာအပေါင်းအထူးသက်ရောက်မှုများတန်ချိန်အရာအားလုံးရရှိပါသည်။ စန်း Andreas နှင့်အခြားဂိမ်းတန်ချိန်: PS ကျနော်တို့သင်သည်အခြားဂိမ်းကစား Grand Theft Auto play ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာလမ်းအေးမြ site ကိုတွေ့ပြီ။ ဘယ်လိုလေ့လာပါ လည်းသူတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် !
% machine 10x မြှောက်ကိန်း
ITCOULDBEYOU 999.999.999 အချက်များ
MUNASEF Adrenaline mode ကို
ALLCARSGOBOOM သို့မဟုတ် CPKTNWT အားလုံးကားများပေါက်ကွဲ
COXEFGU သို့မဟုတ် SPEEDFREAK အားလုံးကားများ nitro ရှိ
ZEIIVG traffic အားလုံးကိုအလင်းအိမ်အစိမ်းရောင်ရှိကြသည်
ITSGALLUS, NINEINAROW, OR SUPER ကောင်းစွာ အားလုံးအဆင့်ဆင့်, မြို့ကြီးများ
SUCKMYROCKET အားလုံးလက်နက်တွေ, လက်နက်, ကဒ် "ထောင်ထဲမှာအခမဲ့ထဲက Get"
[keypad ခရေပွင့] အပြည့်အဝ ammo နှင့်အတူအားလုံးလက်နက်များ
BUCKFAST သို့မဟုတ် CALLMENIGEL အားလုံးလက်နက်တွေများအတွက်စာနယ်ဇင်း [keypad ခရေပွင့]
NIGHTPROWLER သို့မဟုတ် XJVSNAJ အမြဲတမ်းသန်းခေါင်
AFSNMSMW သို့မဟုတ် FLYINGFISH လှေပျံသန်းနိုင်သည်
BSXSGGC သို့မဟုတ် BUBBLECARS ကားများသည့်အခါ hit ကွာ float
R ကို ပြောင်းလဲမှုကိုမျက်နှာပြင် mode ကို
အရေးပေါ်အခြေအနေ ပရမ်းပတာ mode ကို
ASNAEB Clear ကို Wanted အဆင့်အထိ
ကို C လက်ရှိအခြေအနေနှင့်သြဒီနိတ်
CTRL + ENTER ရထားအစွန်အဖျား # 1 (မီးရထားဝင်ရောက်ပြီးနောက်တွန်းအားပေးကုဒ်) မောင်း
ESC CTRL ESC ရထားအစွန်အဖျား #2(မီးရထားဝင်ရောက်ပြီးနောက်တွန်းအားပေးကုဒ်) မောင်း
IAMGARYPENN အပိုထိုးစစ်ဘာသာစကား Enable
IAMNOTGARYPENN အပိုထိုးစစ်ဘာသာစကား Disable
ASBHGRB သို့မဟုတ် BLUESUEDESHOES Elvis နေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်
PPGWJHT သို့မဟုတ် SPEEDITUP ပိုမိုမြန်ဆန်ဂိမ်း
CFVFGMJ မြူဆိုင်းမှရာသီဥတု Set
CRAZYTOWN သို့မဟုတ် PRIEBJ Funhouse ဆောင်ပုဒ်
MROEMZH သို့မဟုတ် ONLYHOMIESALLOWED နေရာတိုင်းဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်
BIFBUZZ သို့မဟုတ် MROEMZH ဂိုဏ်းထိန်းချုပ်မှုလမ်းများ
BAGOWPG ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တစ်ဦးကျေးဇူး Get
ROCKETMAN သို့မဟုတ် YECGAA တစ်ဦး Jetpack ကိုရယူပါ
AIYPWZQP တစ်လေထီး Get
HESOYAM အပြည့်အဝကျန်းမာရေး, လက်နက်နှင့် $ 250,000
HEARTOFGOLD ကြည့်ရန် FMV ပာ
NCSGDAG သို့မဟုတ် PROFESSIONALKILLER အားလုံးလက်နက်စာရင်းဇယားများတွင် Hitman အဆင့်အထိ
CJPHONEHOME သို့မဟုတ် JHJOECW ကြီးမားယုန်-hop
FULLCLIP သို့မဟုတ် WANRLTW အဆုံးမဲ့ ammo မရှိ Reloaded
CAINEMVHZC ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ထိ မိ. လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် မှလွဲ. အဆုံးမဲ့ကျန်းမာရေး
WHEELSONLYPLEASE သို့မဟုတ် XICWMD မမြင်ရတဲ့ကားတစ်စီး
: D .TGA format1 အတွက် screen ဖမ်း
NATURALTALENT အများဆုံးအားလုံးကိုမော်တော်ယာဉ်ကျွမ်းကျင်မှု Set
BUFFMEUP သို့မဟုတ် JYSDSOD အများဆုံးမှကြွက်သား Set
OGXSDAG သို့မဟုတ် WORSHIPME အများဆုံးရိုသေလေးစားမှုကိုသတ်မှတ်မည်
EHIBXQS သို့မဟုတ် HELLOLADIES အများဆုံးလိင်အယူခံ Set
သားပိုက်ကောင်သို့မဟုတ် LFGMHAL mega ခုန်
IAVENJQ သို့မဟုတ် STINGLIKEABEE mega လာကြတယ်
IAMTHELAW သို့မဟုတ် STEVESMATES အဘယ်သူမျှမကရဲ
AEDUWNV ဆာလောင်မွတ်သိပ် get ဘယ်တော့မှမ
AEZAKMI သို့မဟုတ် IFIRSTDOZ Wanted ဘယ်တော့မှမ
AFPHULTL သို့မဟုတ် NINJATOWN Ninja ဆောင်ပုဒ်
TESTEDUCATIONALSKILLS အဘယ်သူမျှမ Wanted အဆင့်အထိ
ALNSFMZO အုံ့ဖို့ရာသီဥတုက Set
[keypad 8] ပန်ကင်မရာတက်
[keypad 2] ပန်ကင်မရာကဆင်း
[keypad 6] ပန်ကင်မရာညာဘက်
[keypad 4] ပန်ကင်မရာလက်ဝဲ
[မူလစာမျက်နှာ] Center ကကင်မရာမြင်ကွင်းကို
[နံပါတ်ကွက် Plus အား] တစ်ခုတည်း frame ကို Pause နဲ့တိုး
PGGOMOY သို့မဟုတ် STICKLIKEGLUE စုံလင်သောကိုင်တွယ်
AUIFRVQS မိုးရာသီမှရာသီဥတု Set
SJMAHPE မည်သူမဆို (9mm) စုဆောင်း
ROCKETMAYHEM သို့မဟုတ် ZSOXFSQ မည်သူမဆို (ဒုံးပျံ) စုဆောင်း
GHOSTTOWN သို့မဟုတ် THGLOJ အသွားအလာကိုလျော့ချ
IOJUFZN အဓိကရုဏ်း mode ကို
CWJXUOC တစ်ဦးသဲမုန်တိုင်း spawn
BRINGITON သို့မဟုတ် LJSPQK ခြောက်လကြယ်ပွချင်အဆင့်ကို Set
LIYOAAY သို့မဟုတ် SLOWITDOWN ပိုနှေးတယ်ဂိမ်း
CQZIJMB spawn Bloodring အို
EEGCYXT သို့မဟုတ် ITSALLBULL spawn Dozer
OHDUDE သို့မဟုတ် OHDUDE spawn Hunter
JUMPJET သို့မဟုတ် JUMPJET spawn Hydra
AGBDLCID သို့မဟုတ် MONSTERMASH spawn Monster
AKJJYGLC သို့မဟုတ် FOURWHEELFUN spawn ကို Quad
PDNEJOH သို့မဟုတ် VPJTQWV သို့မဟုတ် VROCKPOKEY spawn Racecar
AQTBCODX သို့မဟုတ် WHERESTHEFUNERAL spawn ရိုမီယို
CELEBRITYSTATUS သို့မဟုတ် KRIJEBR spawn Stretch
FLYINGTOSTUNT သို့မဟုတ် URKQSRK spawn တန့်လေယာဉ်
AMOMHRER spawn ရေနံတင်သင်္ဘော Truck ကား
TRUEGRIME သို့မဟုတ် UBHYZHQ spawn Trashmaster
KGGGDKP spawn ရေဝဲရှပ်ပြေးယာဉ်
GOODBYECRUELWORLD သို့မဟုတ် SZCMAWO မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေခြင်း
AFZLLQLL သို့မဟုတ် PLEASANTLYWARM နေသာဖို့ရာသီဥတုက Set
ITSTANTRUM သို့မဟုတ် 6031769 Unlimited ဘဝတွေကို
VKYPQCF တက္ကစီ bunnyhop နှင့်အဆင့် 3-hop များ
MGHXYRM သို့မဟုတ် SCOTTISHSUMMER တစ်ဦးမိုးကြိုးပစ် spawn
BGKGTJH သို့မဟုတ် EVERYONEISPOOR ယာဉ်အသွားအလာအားလုံးစျေးပေါကားများဖြစ်ပါတယ်
EVERYONEISRICH သို့မဟုတ် GUSNHDE ယာဉ်အသွားအလာအားလုံးမြန်ဆန်စွာကားများဖြစ်ပါတယ်
ICIKPYH သို့မဟုတ် TOODAMNHOT အလွန်နေသာဖို့ရာသီဥတုက Set
LXGIWYL လက်နက်, လူရမ်းကား၏ကိရိယာများ 1 set
KJKSZPJ သို့မဟုတ် PROFESSIONALSKIT လက်နက် 2, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် tools တွေကိုသတ်မှတ်
UZUMYMW လက်နက်, nutter tools တွေကို3set
K သည် ချုံ့
] alternate zoom ကိုထွက်
L ကို ချဲ့
[ အတွက် alternate zoom ကို
အခြားအ Grand Theft Auto ခေါင်းစဉ်များအတွက်အကြံပြုချက်များ, cheat နှင့်သော့ဖွင့်ရှာဖွေနေပါသလား သင်တို့သည်ငါတို့၏အပေါ်လိုအပ်သောအရာကိုရှာပါ Grand Theft Auto cheat, Code, နှင့် Downloads စာမျက်နှာ။
ပိုများသော cheat နှင့်အရိပ်အမြွက်
ပိုပြီး cheat, အကြံပေးချက်များ, အရိပ်အမြွက်, သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများအတွက်အခြား info စေချင်သလား? နောက်ဆုံးပေါ်ဘို့ငါတို့ဂိမ်းသိကောင်းစရာများ & မဟာဗျူဟာစာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်။
ထိပ်တန်း 17 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရီးရဲလ်အချိန်မဟာဗျူဟာကို PC အားကစားပြိုင်ပွဲ
Duty Modern Warfare ၏ခေါ်ဆိုမှု3ချို့ယွင်းမှုများသိရကိစ္စများ
The Sims3စရိုကျမြား
အဆိုပါ PC ကိုအပေါ်: "အဆိုပါရေခဲပလ္လင် Warcraft 3" အဘို့အ cheat
စစ်ပွဲစနစ်လိုအပ်ချက်များမှာ Duty ကမ္ဘာ့ဖလား၏ခေါ်ဆိုမှု
Sid Meier ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု V ကို Demo
အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံးထောင်ထဲနှင့်နဂါးကို PC Games က 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
2009 ထိပ်တန်း PC ကိုဂိမ်းများ
အခမဲ့ကလေးများရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို Get ဖို့ Website များ
အင်တာနက်ကို 101: Beginners လျင်မြန်စွာကိုးကားစရာလမ်းညွှန်
စာရေး 1,88 - အီးမေးလ်အစီအစဉ်
အကောင်းအဆိုး cons: Automatic တွစ်တာ Feeds
LCD ကို TV ကစွမ်းဆောင်ရည် Enhance ရန် Quantum Dots အသုံးပြုခြင်း
အဆိုပါ Zoho မေးလ် Exchange ActiveSync ကိုချိန်ညှိမှုများဘာတွေလဲ?
Surface Pro3vs အဆိုပါ Microsoft က Surface ကို 3
အဆိုပါ Audyssey DSX ပတ်ပတ်လည်အသံ Format ကို
တစ်ဦး Smart Lock ကဘာလဲ?
ယင်းကို Nintendo 3DS သော့ခတ်အခမဲ့သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာပါ
ထိပ်တန်းနည်းလမ်းများ Safely နှင့်ပညာရှိရှိသင့်ဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုနည်း
သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်း Project ထဲတွင် Azure အသုံးပြုခြင်း
တစ်ဦး XAML ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် "လို" ပိုစတာ Make
သင့်ရဲ့ Facebook ကိုသူငယ်ချင်းများစာရင်း Hide လုပ်နည်း
Google App Engine vs အမေဇုံ EC2
ဘယ်လို Links များရှာရန်နှင့် Gmail ထဲတွင်သူတို့ကို Send မှ
ဘယ်လိုက Wi-Fi ကိုအလုပ်လုပ်အကြောင်းအသုံးဝင်သောအချက်အလက်
အဆိုပါတစ် CSO ဖိုင်မှတ်တမ်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်မည်သို့ဖွင့်ပါမှ Learn